I-TRF kwiphephandaba 2017 | Isiseko soMvuzo | Amaphephancwadi kunye ne-intanethi
Ikhaya Ngathi I-TRF kwi-Press 2017
Umshicileli ufumene i-Foundation Reward Foundation kwaye isasaza igama ngomsebenzi wethu kubandakanywa: iiklasi zokuqwashisa i-porn; umnxeba osebenzayo, imfundo yesini esekelwe ebuchosheni kuzo zonke izikolo; imfuneko yokuqeqesha ababoneleli bezempilo be-NHS ekukhuselweni koonografi kunye negalelo lethu uphando kwizidalwa zesondo ezibangelwa ziintlobano zesini. Eli phepha libonisa ezinye zeempumelelo zethu kumaphephandaba nakwi-intanethi. Kwakungunyaka wethu obalaseleyo.
Amaphephancwadi kunye ne-Intanethi
I-2 ngo-Disemba 2017-Inkonzo yeendaba ekwi-Intanethi eCroatia. Udliwanondlebe olupheleleyo noMary Sharpe luyafumaneka Apha ngesiCroatia. Iinguqulelo zeGoogle inomsebenzi omuhle owuhambisa kwisiNgesi. Enye, i-long version yodliwano-ndlebe ivele kwiphephandaba leveki nganye iGlas Koncila kwi-16 Novemba 2017 kwaye ibonakala Apha.
Ngomhla we-16 ku-Okthobha 2017-landela udliwanondlebe lweRadio Sputnik
Inqaku elipheleleyo likhoyo Apha kwi-intanethi. I-blog ye-TRF kwintliwano ndlebe Apha kwaye ikuvumela ukuba uphulaphule intetho evulekileyo evuliwe.
Nge-10 ka-Okthobha 2017-TRF kwiPolisaProfessional.com, inqaku likaNick Hudson
9 Okthobha 2017-TRF kwiphephandaba lesizwe
Inqaku elipheleleyo likhoyo Apha.
Ibali elipheleleyo likhoyo Apha.
I-TRF kwiphephandaba leBusiness
I-4 ka-Okthobha i-2017-Iimpawu ze-TRF kwibali elingaphambili
I-27 ngoSeptemba 2017-Isiseko soMvuzo yayingabaxhasi abasemthethweni beSiphumo seCoolidge e-Edinburgh
Nge-23 kaSeptemba 2017-Isiseko soMvuzo yayingabaxhasi abasemthethweni beSiphumo seCoolidge e-Edinburgh
Inqaku elipheleleyo le-Christian Institute lifumaneka kwi-intanethi Apha. Inguqulo yalo ibonakala kwiwebhusayithi yeSwiss christian jesus.ch I-Pornographie ithandwa nguJugendliche zu sexuellen Straftaten kwi-13 Septemba 2017.
I-Scottish Daily Mail, 4 Septemba 2017. Ibali lifumaneka kwi-intanethi Apha.
I-Herald, i-4 Septemba 2017, Ikhasi 12. Itholakala kwi-intanethi Apha. Kwakhiwa kwakhona I-intanethi ye-intanethi ibangelwe ukunyuka kobugebengu bobulili obungaphantsi kwe-18 on Aadhu.com kwangalo mini. Inguqulelo yolwimi lwaseJamani ivele kwiwebhusayithi yase-Austrian 'iindaba zeteknoloji yexesha elizayo' njenge I-Schottland gibt I-Online-Pornos Inomdla Wokulala-I-Verbrechen.
I-Post Post, i-3 Septemba 2017. Ibali lifumaneka kwi-intanethi Apha. Iinguqu zapapashwa kuhlelo lweDundee kunye neNewcastle.
Imeyile yangeCawa, umhla wama-20 ku-Agasti 2017. Eli bali liyafumaneka kwi-intanethi Apha.
I-Courier 3 Matshi 2017
Inguqulelo ehleliweyo yeli bali leScotfully linokubonwa kwi-addictionhelper.com Apha.